ပရိသတ်တွေကို ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်တော့မယ့်အကြောင်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တကွပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေး…… – Cele Oscar
ပရိသတ်တွေကို ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်တော့မယ့်အကြောင်း ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တကွပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေး……
January 5, 2022 By L YC Celebrity
ပရိသတျကွီးရေ ဖွူဖွူထှေးကတော့ ကိုယျပိုငျစိတျကူးလေးတှေ နဲ့ ကွျောငွာတှကေို ရိုကျကူးပွီးပရိသတျ အခဈြတှကေို ရယူထားနိုငျသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ. . ဖွူဖွူထှေးကတော့ မိသားစုလိုကျ ရိုးသား ဖွူစငျခွငျးတှနေဲ့ အတူ အလှူအတနျးတော့လညျး ရကျရောတယျဆိုပွီးတော့ ပရိသတျမြား ကလညျး ခဈြပေးခဲ့ကွပွနျပါတယျ။ နိုငျငံရေးမ တညျငွိမျနတေဲ့ အခြိနျကာလအတှငျးမှာတော့
ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ တိတျဆိတျငွိမျသကျနခေဲ့ပွနျပါတယျ. .. အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားလညျး တရားသောဘကျနှငျ့ မတရားသောဘကျကိုလူသားခငျြးသိတတျစှာဖွငျ့ သိတတျခဲ့ကွပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ ရပျတညျခဲ့ ကွပမေဲ့ အဲထဲမှာ ဖွူဖွူထှေး ကတော့တိတျဆိတျနခေဲ့ ပွနျပါတယျ။ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ
ပွညျသူတှအေတှကျ အအေးဗူးတှေ ထှကျပွီး ကမျးလှမျးခဲ့ပမေဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ သူမအပျေါမှာ ခဈြတဲ့အ ခဈြတှေ အစား ဝဖေနျမှုတှသော တိုးနခေဲ့ပွနျပါတယျ။ ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ဖွူဖွူထှေးက ဟာသနောကျခံ စကားပွောထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတဈခုကို တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီးလညျး ဖွူဖွူထှေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို ကွညျ့ပွီး အားပေးစကား လေး ရေးသားခဲ့ကွပါအုံးနျော…
Source: Phyu Phyu Htwe
ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြူဖြူထွေးကတော့ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးတွေ နဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးပြီးပရိသတ် အချစ်တွေကို ရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. . ဖြူဖြူထွေးကတော့ မိသားစုလိုက် ရိုးသား ဖြူစင်ခြင်းတွေနဲ့ အတူ အလှူအတန်းတော့လည်း ရက်ရောတယ်ဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်များ ကလည်း ချစ်ပေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမ တည်ငြိမ်နေတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့
ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်. .. အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း တရားသောဘက်နှင့် မတရားသောဘက်ကိုလူသားချင်းသိတတ်စွာဖြင့် သိတတ်ခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့ ကြပေမဲ့ အဲထဲမှာ ဖြူဖြူထွေး ကတော့တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ ပြန်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်
ပြည်သူတွေအတွက် အအေးဗူးတွေ ထွက်ပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမအပေါ်မှာ ချစ်တဲ့အ ချစ်တွေ အစား ဝေဖန်မှုတွေသာ တိုးနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးက ဟာသနောက်ခံ စကားပြောထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို ကြည့်ပြီး အားပေးစကား လေး ရေးသားခဲ့ကြပါအုံးနော်…